बिना प्रचारको ‘मिस्टेक’ ले के गर्ला, निर्माताका गोजी भर्ला ? « Mazzako Online
बिना प्रचारको ‘मिस्टेक’ ले के गर्ला, निर्माताका गोजी भर्ला ?
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौं, मंसिर ११–
भोली अर्थात मंसिर १२ गतेबाट विना प्रचारप्रसार फिल्म ‘मिस्टेक’ सार्वजनिक प्रदशर्नमा आउदैछ । प्रदर्शनको पर्खाइ घण्टा रहंदासम्म फिल्मसँग सम्बन्धित कुनै पनि सदस्य प्रचार प्रसारमा छैनन् ।
बिना प्रचार फिल्मको व्यापार कस्तो रहला ? प्रचार प्रसार नै फिल्म व्यापारको मुख्य कडी मानिदैं आएको छ । यद्पी व्यापाक प्रचार गरिएका फिल्मको पनि व्यापार सुखद् नै छन् भन्ने होइन । तर, दर्शकलाई हलसम्म तान्ने प्रचार नै प्रमुख हतियार हो । दर्शक हलमा गएर फिल्मबारे प्रतिक्रिया दिएपछि व्यापारिक मोड तय हुने चलनलाई नकार्न सकिनं ।
फिल्म ‘मिस्टेक’ को हकमा नायक निर्मल सेन्चुरी बाहेक अन्यले प्रचार प्रसारमा तत्परता नदेखाएको पाइएको छ । निर्मलले आफ्ना सर्कलका मिडियाकर्मीलाई प्रचारको अनुरोध गरिरहंदा ‘मिस्टेक’ सँग आवद्ध अन्य सदस्य भने सम्पर्कमै छैनन् । निर्देशक ऋषिराज आचार्य अर्को फिल्म खिच्न व्यस्त रहे भने निर्माताको टोली सम्पर्कमा नै नरहेको बताइन्छ ।
विष्णु ठडराईको प्रस्तुती रहेको फिल्म ‘मिस्टेक’ मा नायक सेञ्चुरी सँगै अर्का नायक सुशान्त कार्की र नायिका हर्षिका श्रेष्ठको मुख्य भूमिका छ । बिना प्रचार प्रसार प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘मिस्टेक’ को व्यापारिक अपेक्षा कसरी सुखद् गर्न सकिएला ?